MOETHIHAAUNG: မြန်မာ ပင်လယ်ပြင် ၏ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ကို ဖျက်ဆီးနေ သော SHWE သဘာဝဓာတ်ငွေ့DAEWOO
မြန်မာ ပင်လယ်ပြင် ၏ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ကို ဖျက်ဆီးနေ သော SHWE သဘာဝဓာတ်ငွေ့DAEWOO
၂၁.၄.၂၀၁၄ နေ. မနက် ပိုင်း ၇း ၄၅ နာရီ တွင် SHWE သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့စင် အောက် ရေပြင် တခု လုံး ဆီ များဝေ့ နေ သည်။ ပင်လယ် တွင် ကျက် စား သော ငါး များ အဝေး သို့ကူး ခတ် ပြေး နေ သည်။ ရွှေသဘာဝဓာတ်ငွေ့စင် မှ အသုံး ပြူ ပြီးသော ချောဆီ ၊ ဒီဇယ် များ ကို ပင် လယ် တွင်း သို့တိုက် ရိုက် သွန်ချ လိုက် သလား ပင် ထင် ရ၏။ ဝေ့၀ဲ နေ သော ဆီ များ ကို ၄င်း စင်ပေါ် တွင် အလုပ်လုပ်နေ သော လူ တိုင်း တွေ့မြင် ရ၏။
သဘာဝပတ် ၀န်းကျင် နှင့် ပတ် သက်၍ နိုင်ငံတကာ မှ သတ် မှတ် ထားသော စွန်. ပစ် ရေ တွင် ဆီ ပါ ၀င် နှုန်း (oil in water) 30 ppm နှင်. နှိုင်းယှဉ် လျှင် အလွန် အမင်း များ ပြားနေ ပါသည်။ 5၀၀ ppm နှင့် အထက် ရှိပေ မည်။ အဘယ်ကြောင့် ယခု ကဲ့ သို့ဖြစ်ရသည်ကို စင် ပေါ် ရှိ လူ များ ကို လိုက် လံ မေး မြန်း ကြည့် ရာ Operation ဘက် ရှိ ဒီဇယ် သိုလှောင်ကန် မှ ဒီ ဇယ် အဟောင်း များ အား ပင် လယ် တွင်း သို့သွန် ချ ခြင်းကြောင့် ဖြစ် သည် ဟု ဆို သည် ။ ခန့် မှန်း ခြေ ဒီ ဇယ် ၅၀၀၀ လီ တာ မျှ ပင် လယ် အတွင်း သို့သွန် ချ လိုက် ခြင်း ဟု သိ ရ သည်။
ယခု ဖြစ် စဉ် တွင် ဒီ ဇယ် များ သာ မက condensate ဟု ခေါ် သော သဘာဝ ဓာတ် ငွေ့ရည် များ ပါ ပင် လယ် တွင်း သို့ရောက် ရှိ သွား ပေသည်။ အဘယ် ကြောင့် ဆို သော် ဒီဇယ် ဆီ များ ဝေ့ ၀ဲ နေ သည့် အချိန် တွင် လူ နေ ခန်း များ တွင် condensate အနံ များ စူး ရဲ စွာ နံ နေ ပေသည်။
ယခု ကဲ့ သို့ဖြစ် ရပ် အား တခြား နိုင်ငံ များ တွင် ဖြစ် ပေါ် ပါ က ချက် ချင်း ဆို သလို အရေး ယူ မှု ရှိ ပေ မည်။ ယခု ဖြစ် စဉ် ကို ကျွန်တော် နှင်. အတူ မြင် တွေ့လိုက်သော ဥရောပ တိုက် သား နိုင်ငံ ခြား သား များ က ထို ကဲ့ သို့ ပင် လယ် ပြင် တွင်း ဆီ ကျ ပါ က ချက် ချင်း အရေး ယူ ခြင်း၊ တာဝန် ရှိ သူ အား ထိရောက် စွာ အရေးယူ ခြင်း၊ ကုမ္ပဏီ အား ဒဏ်ငွေ တပ် ခြင်း များ လုပ်ဆောင် သည် ဟု သိရ ၏။ မြန် မာ ရေ ပြင် သဘာ ၀ပတ် ၀န်းကျင် ကို ထိ ခိုက် စေ သော ယခု အပြူ အမှု တွင် မည် ကဲ့ သို့အရေး တယူ ပြူ မည် ကို မသိ ရပေ။ မြန်မာနိုင်ငံ ၏ သဘာ ၀ သယံဇာတ ကို ထုတ် ယူ ပြီး အရေးမစိုက် မြန်မာ သဘာဝ ပတ် ၀န်း ကျင် ကို ထိ ခိုက် စေ ခြင်း မှာ စော် ကား မှု ပင် ဖြစ်သည်။
မြန်မာ အစိုး ရ နှင့်ကုပဏီ ကြား သဘော တူ ချက် အရ မြန်မာ နိုင်ငံ သား များ ကို နည်းပညာ အတွေ့အကြူံ ရ စေ ရန် နိုင်ငံခြား သား များ နှင့်ပူးတွဲ ပြီး အလုပ် လုပ် စေ သည်။ သို့ သော် နည်းပညာ ပိုင်း အားနည်း သော ဖိလစ် ပိုင် လူမျိူး များ အား ရွှေ သဘာဝဓာတ် ငွေ့ စင် ၏ Operation and Maintenance အတွက် ခန်.ထားကြောင်း သိရ သည်။ ထို ဖိလစ် ပိုင် များ သည် နည်းပညာ ပိုင်း နှင်. ပတ် သက် ၍ နိုင်နည်း မှု မရှိ သဖြင့် မိမိ တို. နိုင်ငံ ၏ ရှယ် ယာ တပိုင်း ဖြစ် သော သဘာဝဓာတ် ငွေ့လုပ် ငန်း အတွက် အကျိူး ဆုတ်ယုတ် မှု သာ ဖြစ် စေ သည်။
ရွှေ သဘာ ၀ဓာတ် ငွေ့လုပ် ငန်း တွင် နည်းပညာ ရ ရှိ ရေး အတွက် ဖိလစ်ပိုင် များ ကို ခန့်ထားသော် လည်း အင်္ဂလိပ် စကား မှ လွဲ ၍ ၄င်း တို. သည် သက် ဆိုင် ရာ လုပ် ငန်း နယ် ပယ် နှင့် ပတ် သက် ၍ အင် ဂျင် နီ ယာ ဘွဲ.ရ များ မဟုတ် ဘဲ သာ မန် စက် မှု လက် မှု အထက် တန်း လက် မှတ် များ သာ ရ ရှိ သူ များ ဖြစ် ပြီး အခြေ ခံ အင်ဂျင်နီ ယာ တွေးခေါ် မှု မျှ မတတ် သော သူ များ သာ များ သည်။ နိုင်ငံ တော် အစိုးရ အနေ နှင်. မြန်မာ သဘာဝ ဓာတ်ငွေ. လုပ် ငန်း တွင် မြန်မာ များ နေ ရာ ယူ နိုင်ရေး အတွက် မြန်မာ အင်ဂျင် နီယာ များ ကို ၄င်း ဖိလစ် ပိုင် များ နှင့် တွဲ ဖက် ခန့်ထား သော် လည်း အရည်အချင်း မပြည့် ၀သော ဖိလစ် ပိုင် များ ကြောင့် အကျိူးကျေး ဇူး ထက် ဆုံးရှုံးမှု သာ များ သည်။ ရွှေ သဘာ ၀ ဓာတ် ငွေ့လုပ် ငန်း သည် မြန်မာ အစိုးရ ရှယ်ယာ အဖြစ် ပါ ၀င် သော ကြောင့် နိုင်ငံ တော် ပိုင် လုပ် ငန်း တခု ပင်ဖြစ် သည်။ ထို လုပ် ငန်း၏ ဆုံးရှုံး မှု သည် မြန်မာ နိုင် ငံ အတွက် ဆုံး ရှုံး မှု ပင် ဖြစ် သည်။
ထို ပြင် ယခု ဖြစ် ရပ် ကဲ့ သို့ပင် လယ် ပြင် သဘာ ၀ပတ် ၀န်းကျင် ထိခိုက် မှု သည် ရေရှည် တွင် မြန်မာ နိုင်ငံ အတွက် ကြီး မား စွာ ထိခိုက် ပေ လိမ့်မည်။ တခြား နိုင်ငံ များ တွင် ပင် လယ် ပြင် သို့ဆီ ကျ ပါ က ဒဏ်ငွေ ရိုက် ခြင်း ၊ တာဝန်ရှိ သူ ကို ထိရောက် စွာ အရေးယူ ခြင်း ၊ လွန်ကဲစွာ ထိခိုက် မှု ဖြစ် ပါ က ခုံ ဖွဲ. စစ်ဆေး ခြင်း များ ပြုလုပ် ကြသည်။ ယခု မှု မြန်မာ အစိုးရ ၏ သဘာဝ ပတ် ၀န်း ကျင် ဆိုင် ရာ အသိ အားနည်း မှု၊ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီး မြူပ်နှံ မှု များ ကို လွန်ကဲ စွာ မျက်နှာ သာ ပေး မှုများ ကြောင့် မြန်မာ ပတ်ဝန်း ကျင် ညစ် ညည်း ရပေ မည်။
ထို့ကြောင့် အထက် ပါ ဖြစ် ရပ် အား ထိရောက် စွာ အရေး တယူ ပြု ပေး ရန် တာ ၀န် ရှိ သူ များ ကို တင် ပြ အပ် ပါ သည်။
ေ-ရွှေ မှ မြန်မာနိုင်ငံသား တစ်ဦးက သစ်ထူးလွင် သို့ရေးသားပေးပို့ သည်။ (via Myanmar Forward)
Posted by Myo Lwin Aung at 10:21 AM